Warar - Soo bandhig faahfaahsan oo silig xijaaban
Xarigga siligga ah ayaa qalooca oo lagu dhejiyaa mashiinka siligga si buuxda otomaatiga u ah. Caadi ahaan waxaa loo yaqaanaa birta birta loo yaqaan, birta siligga leh, silig isku xiran. Noocyada alaabooyinka la dhammeeyay: silig keliya oo la maroojiyo iyo silig laba jibbaaran. Wax ceeriin: silig bir ah oo kaarboon ah oo tayo sare leh. Geedi socodka daaweynta dusha: koronto-galvanized, galgashiye kulul-faleebo, daahan caag ah, buufin caag ah. Waxaa jira buluug, cagaar, jaalle iyo midabbo kale. Isticmaala: Loo adeegsado ilaalinta go'doominta xuduudaha cawska, jidadka tareenka, jidadka waaweyn, iwm.
Kala soocida Habka Maroojinta
Xarigga siliggu waa shabaq ilaalin gooni ah oo lagu sameeyo iyadoo lagu xirayo siligga birta ah ee siligga weyn (siligga siligga ah) iyada oo loo marayo mashiinka siligga lagu xiro, iyo iyada oo loo marayo geeddi-socodka kala duwan ee tolidda.
Waxaa jira seddex habab oo qaloocin loogu talagalay siligga salka leh: leexashada hore, leexashada gadaal, iyo leexashada xagga hore.
Habka qalloocsan ee qumman: Waa in lagu weeciyo laba fiilooyin bir ah ama fiilooyin badan oo bir ah xadhig silig bir ah oo laba-laaban ka dibna dabayl silig silig ah oo ku wareegsan siligga birta ah ee laba-laaban.
Qaabka qallooca ee soo noqoshada ah: Marka hore, siligga siligga ah waxaa lagu dhaawacay siligga weyn (taas oo ah, hal silig bir ah) ka dibna silig bir ah ayaa la qalooca oo la qalooca si loo sameeyo silig laba-lab ah.
Habka qalloocsan ee togan iyo mid taban: Waxay u weecaneysaa dhinaca ka soo horjeedka halka siligga xayndaabka ahi uu ku ag yaallo siligga weyn ee birta ah. Hal jiho looma leexleexo.
Sababta loogu daaweynayo dusha sare waa in la xoojiyo caabbinta daxalka iyo in la dheereeyo nolosha adeegga. Daaweynta dusha sare ee siligga siligga leh ee galvanized waa galvanized, kaas oo noqon kara koronto-galvanized ama kulul-maquufin galvanized; daaweynta dusha sare ee siligga siligga ah ee PVC waa mid dahaaran PVC, siligga xarkaha gudahana waa silig madow, fiilo elektaroonik ah iyo fiilo kulul.
Fiiladda aluminium-ka ah ee xarkaha xidhan waa shey cusub oo hadda suuqa la soo galiyay. Dushiisa waxaa lagu daboolay lakab aluminium ah, oo sidoo kale loo yaqaan aluminized. Qof kastaa wuu ogyahay in aluminium uusan daxalaysan, sidaa darteed aluminium dahaadhka dusha sare ayaa si weyn u wanaajin kara caabbinta daxalka oo ka dhigaysa mid sii dheeraata. Ujeedada siligga xarkaha leh: waxaa loo isticmaalay ka hortagga tuugada iyo ilaalinta warshadaha, guryo gaar loo leeyahay, dabaqyada koowaad ee dhismayaasha la deggan yahay, goobaha dhismaha, bangiyada, xabsiyada, dhirta daabacaadda daabacaadda, mashiinnada milatariga, bungalows, derbiyada hoose iyo meelaha kale.
Qeexitaannada iyo Qiimaha Xisaabaadka
Cabirka siligga BWG Masaafada 3 " Masaafada 4 " Masaafada 5 " Masaafada 6 "
Xisaabinta Xisaabta Qiimaha siligga
wadarta miisaanka X (qiimaha wadaagga X70% + qiimaha siligga xaydha ee X30%) + khidmadda ka shaqeynta
Xisaabinta Qiimaha rasmiga ah ee siligga sariirta
Mustaqbalka, waxaan soo qori doonnaa xogta ugu macquulsan ee qof walba uu ku faahfaahin karo.
1. Qiimaha usha siliggu wuxuu ku saleysan yahay oraahdii ugu dambeysay ee ushii silig la soo saaray bishii Sebtember 22, 2014. Saamaynta ay yeelatay waxsoosaarka waxsoosaarka birta qaranku, guud ahaan qiimaha birta ayaa hoos u dhacay. Qiimaha halkii tan ee siligga siligga ayaa ku dhow RMB 2580 halkii tan.
2. Qiimaha ka shaqaynta usha siligga. Guud ahaan marka la hadlayo, qeexitaannada siligga xarkaha leh ayaa ah No. 14 silig bir ah (220mm) iyo No. 12 silig bir ah (260mm). Khidmadda wax-soo-saarka ee siligga koronto-galvanized sida ku cad qeexitaanka ugu dambeeyay ee 220mm wuxuu ku saabsan yahay RMB 750 halkii tan. Dabcan, waxaa jira galgashiyeyn kulul iyo bac balaastik ah, iwm, oo aan halkan ku qorneyn.
3. Kordhinta kharashyada. 220mm silig xarka leh, masaafada xayndaabku waa 12com, khidmadda farsamaynta ee halkii tan waa 320 yuan.
Sidaa darteed, qiimaha warshaddii hore ee 220mm silig goglan oo caadi ah halkii tan waa 2580 + 750 + 320 = 3650 RMB halkii tan, mana ku jiraan xamuul. Haddii macaamilku dareemo in sicirka siliggu sarreeyo markii uu iibsanayo, wax yar ayaad ka xusi kartaa. Qiimaha hoos u dhig. Markii aan arkay tan, ma garanayo haddii qof kastaa ku kalsoon yahay qiimaha siligga xarkaha leh? Waxaan sidoo kale xasuusinayaa qof walba inuu go'aansado maaddada, qeexitaannada, iyo cabbirka intaan la iibsan si looga fogaado in la khiyaaneeyo.